Thola isikhungo seGravity for Great Presentation Design | Martech Zone
Wonke umuntu uyazi ukuthi iPowerPoint ilulimi lwebhizinisi. Inkinga ukuthi, amatafula amaningi e-PowerPoint awalutho nje kochungechunge lwezilayidi ezigcwele ngokweqile futhi ezivame ukudideka ezihambisana nokuzikhulumela okwethulwa ngabethuli.
Njengoba sesithuthukise izinkulungwane zezethulo, sikhombe izindlela ezinhle kakhulu ezilula, kepha ezingavamisile ukusetshenziswa. Ukuze senze lokho, sidale Isikhungo seGrivity, uhlaka olusha lokwethula izethulo. Umqondo ngukuthi idokodo ngalinye, sonke isilayidi, nakho konke okuqukethwe ngaphakathi kwedeski kudinga indawo yokugxila. Ukuze wenze kanjalo, umuntu udinga ukucabanga ngezethulo ezivela ezindaweni ezintathu ezibukeka kahle: (1) imacro, isethulo esibanzi, (2) isilayidi-nge-slide, kanye (3) nezinga lembumbulu, lapho yonke ingcezu yedatha noma okuqukethwe ngaphakathi kwento ngayinye isilayidi sicatshangelwa ngokucophelela.
Thatha i-Macro Perspective
Okokuqala, cabanga ngezethulo ngombono omkhulu, ubheke isethulo sakho sisonke. Yiliphi iphuzu eliyinhloko lesethulo sakho, elenza ukuthi idokodo lihlangane futhi ligcizelele injongo yenkulumo yakho? Bese uya ezingeni elilodwa ujule. Isilayidi ngasinye kufanele sithuthukise ngenhloso injongo yedeski. Uma ingakwenzi lokho, kufanele ubuze, iyini inhloso yaleso slide? Ihlangana kanjani nesithombe esikhulu sesethulo?
Ngaphezu kwalokho, isilayidi ngasinye kufanele futhi sibe nesikhungo saso seGravity, ukugxila okukuhlanganisayo, kusinikeze ukulingana nokuhlangana. Okokugcina, sondeza eduze okuqukethwe kwesilayidi ngasinye. Hlola isigaba ngasinye, ishadi ngalinye, isihloko ngasinye. Into ngayinye, itafula noma igrafu kufanele ikhulume ngokugxila kwesethulo, kepha futhi idinga iphuzu layo lokugxila.
Ake ngifanekise ngengathekiso. Thatha isimiso sethu sonozungezilanga. Ilanga liyinto esemqoka yesimiso sonozungezilanga futhi linamandla adonsela phansi kwiplanethi ngayinye. Kodwa-ke, iplanethi ngayinye inamandla ayo adonsela phansi. Ngendlela efanayo, isilayidi ngasinye, nayo yonke into engaphakathi kwesilayidi ngasinye, kufanele ikhulume nendawo yonke yamandla adonsela phansi (okungukuthi, ilanga). Kodwa-ke, njengamaplanethi asesimisweni sethu sonozungezilanga, isilayidi ngasinye nayo yonke into eslayidini ngasinye nayo kufanele ibe nokugxila kwayo, okugcina kuyisisekelo futhi kuhlangene.
Ake sibuyekeze amanye amasu namasu wokuqinisekisa ukuthi ukugxila kugcinwa ezingeni ngalinye.
Cabanga Ideski Lakho Lonke
Isethulo sakho sisonke kufanele sibe nomqondo owodwa omkhulu, ingqikithi noma inhloso. Kudingeka kube nenhloso efanayo. Ingabe le ndawo yokuthengisa ithengisa umsebenzi wakho, imibono yakho, ucwaningo lwakho? Uma kunjalo, nquma ukuthi yini oyithengisayo. Ngenye indlela, ingabe ideski lakho limane labelana ngomsebenzi wakho, ukwazisa ngaphandle kwesidingo sokwenza izilaleli zenze okuthile. Uma wabelana, yiziphi izinto ofuna ukuthi izilaleli zizithathe kusethulo?
Okulandelayo, cabanga ngezilaleli. Ezingeni elikhulu, cabanga ngokwakhiwa kwezithameli zakho, noma ngabe amakhasimende, abaphathi, noma inhlangano ebanzi. Iningi lezethulo alilinganiselwe kahle ngezidingo zezithameli. Esikhundleni salokho, zakhiwe ngokubuka kwezipikha, kepha kubalulekile ukwahlukanisa izethameli zakho nokwakha indaba yakho ezibazungezile. Kungani belapha? Lithini izinga labo lobungcweti nezindima zabo? Banesifiso esingakanani semininingwane eyimbudumbudu, ama-akhronimi, njalo njalo? Yiziphi izinkathazo zabo zobungcweti, izingcingo zabo ezenzweni? Ingabe bayangabaza noma bangamakholwa? Hlobo luni lokumelana ozobhekana nalo? Izimpendulo zizosiza ukuhlela ukuthi uyakha kanjani ipaki lakho. Ukucabanga ngokujulile ngezilaleli zakho ngaphambi kokwakha isethulo sakhokuzosiza ukwandisa 'umthelela wayo.
Okokugcina, cabanga ngobumbano. Hlehlela emuva bese ubuka konke kusuka kumbono wokuklama nokuxoxa izindaba. Okokuqala, yakha isakhiwo sokulandisa. Isethulo asilona uchungechunge lwemibono enqanyuliwe, amaphuzu wedatha noma ukubonwa, kepha kuyindlela yokugcina yokuxoxwa kwezindaba ze-multimedia. Idizayini yokwethula isiyalo esivelayo esihlanganisa amagama, ividiyo, ukugqwayiza, idatha, noma yimiphi imidiya ongayicabanga.
Ideski ngalinye lidinga isakhiwo sokulandisa; ukuqala, maphakathi, nokuphela, ngenkathi kudilizwa imiqondo esemqoka yaba izigaba nezigatshana. Lapho isihloko siyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kudingeka ukuhleleka okwengeziwe. Umuntu udinga isibambo semiqondo yeqembu, akhe isigaba sabaphathi nokulandelana. Ngiqala ngokuchaza, okwakha ubukhosi ngokuchazwa, bese ngidlulela ekubhaleni izindaba (okungukuthi, izikwele ezingaba yisishiyagalolunye noma eziyi-12 eshidini), bese ngenza imidwebo emibi, ngaphandle kwemininingwane. Le nqubo iyindlela yokuthatha imininingwane eyinkimbinkimbi nokwakha ukulandisa okubukwayo. Ngokusebenzisa inhlanganisela yokuchaza nokuhlelwa kwezindaba, umphumela uzoba isakhiwo sokulandisa esihleliwe esinezigaba ezihlosiwe ngenhloso.
Uma kukhulunywa ngamasu wokuqamba alula, umthetho oyisisekelo ongawulandela ukwakha ubumbano kuyo yonke impahla yakho ukukhawulela opopayi nezinguquko. Eqinisweni, ukukhawula konke ukunyakaza ekushintsheni okuyisisekelo kokufiphala kungumthetho omuhle wesithupha. Ngaphandle kokuthi ungumklami onekhono noma i-animator, kufanele uhlale kude nokugqwayiza kwe-PPT nezinguquko. Lokho kusho ukuthi, ukufiphala kokushintshwa kwenza isisekelo esihle sezethulo ngoba zilula, zisetshenziswa kakhulu kwifilimu, kepha hhayi ezishisayo
Amacebo amabili alandelayo ahlobene namafonti. Zama ukunamathela emindenini emibili yamafonti kusethulo: esisodwa sezihloko zezindaba nezihloko, esinye sakho konke okunye (kufaka phakathi imibhalo engezansi nekhophi lomzimba). Okungcono futhi, sebenzisa umndeni wefonti eyodwa kepha uguqule izinsimbi (isb. Ezinesibindi kuzihloko zezindaba nezihloko, ezijwayelekile noma ezikhanyayo zekhophi yomzimba nemibhalo engezansi). Imvamisa ngisebenzisa uFranklin Gothic, okuyi-font enhle nenhle. I-Calibri iyindlela enhle yokwenza ikhophi yomzimba nombhalo omude, ngoba ngosayizi omncane wefonti wonga isikhala, ngenkathi kulula ukusebenza nayo.
Icebo elilandelayo ngombala. Uma kukhulunywa ngemibala yefonti, jwayela ukusebenzisa umbala owodwa kuyo yonke indawo, noma izithunzi zombala ofanayo, empeleni omnyama / ompunga. Ungathi lokho kuyisicefe, kepha iqiniso intshisekelo ebonakalayo iyadalwa kusuka ku-nuance ekusetshenzisweni kwamafonti, hhayi ku-rainbow yamafonti anemibala egqamile. Intshisekelo ebonakalayo ivela kubaphathi, izithombe noma idatha. Ngakho namathela kwifonti eyodwa noma ezimbili, futhi ukhawulele ukusetshenziswa kombala. Ngokufanelekile sebenzisa umbala owodwa kuwo wonke amakhophi omzimba, nemibala ehlukene yombala ofanayo ukudala isigaba sabaphathi.
Isilayidi ngasinye, Iphuzu Lokugxila
Sibheke emphemeni emhlabeni jikelele; manje sizomboza amaslayidi ngamanye. Usihlola kanjani isilayidi? Uqinisekisa kanjani ukuthi ngamunye unesikhungo samandla adonsela phansi kulowo nalowo? Futhi, isilayidi ngasinye kufanele sithuthukise inhloso ephelele yedeski. Uma kungenjalo, kungani ikhona? Noma kunjalo, isilayidi ngasinye sidinga nendawo yaso yokugxila. Kufanele kube nokulandelana, ukulinganisela kanye nezimpawu zokubuka ukwenza incazelo yesilayidi ngayinye icace, ngenkathi ihlukanisa imininingwane ebaluleke kakhulu ngokumelene nalokho okungabalulekile kangako.
Njengamanye amazinga, kunamaqhinga okufanele uwasebenzise ezingeni lama-slide. Ukuhlakanipha okuvamile kokwakhiwa kwesilayidi ukwethula umbono owodwa ngesilayidi ngasinye. Inkinga ukuthi, lokho akuhlali kunengqondo ngaso sonke isikhathi. Umbono owodwa ngesilayidi ngasinye uyicebo elihle lezinkulumo ze-TED, kepha akusebenzi ngaso sonke isikhathi ukwethulwa kwezinkampani kwansuku zonke, ngokuqinisekile hhayi ocwaningweni noma izethulo eziyinkimbinkimbi ezinedatha eningi.
Ezinkulumweni eziningi zezinkampani, "ukugxusha ama-slide" akunakugwemeka. Isixazululo ibhalansi ebonakalayo kanye nokulandelana, ngakho-ke esikhundleni sokugxila kumqondo owodwa ngesilayidi ngasinye, ipharadigm efanelekile kufanele umbono owodwa ngesikhathi ngasinye ngesikhathi. Ungaba nemibono eminingi njengoba kudingeka kwisilayidi esinikeziwe, kanye nemininingwane eminingi, kepha ukhiye ukulawula ukunaka kwezilaleli ngesikhathi ngasinye ngesikhathi. Lokhu kumayelana nokwenza lula ukuxhumana kwesikhathi sangempela phakathi kokubonwayo namagama akhulunywayo, ukuqinisekisa ukuthi izethameli azididekile. Okubukwayo namagama kufanele kuxhumeke ngokusobala ngaso sonke isikhathi.
Elinye iqhinga - lula. Mhlawumbe kungokufisa okuncane, kepha ukwakheka okuhlanzekile kupholile. Ukukhethwa nokuhlelwa kwakha kube lula. Uma ungabaza, ukuchema kufanele kube ekusikeni nasekubekeni okuncane kunokuningi kwisilayidi ngasinye.
Okulandelayo, cabanga ngesikhala esibi esizungeze ukudlula kombhalo, ishadi noma isithombe. Isikhala esingesihle sisiza ekuchazeni imingcele kusilayidi nesithombe, futhi sakha ibhalansi. Lo ngumqondo ocashile, kepha ungeza ubucayi ekwakhiweni kwesilayidi. Ufuna isikhala esibi kodwa hhayi kakhulu; ibhalansi ethatha ukucabanga nokwenza. Lwela ukulinganisela, futhi amaslayidi azoba nokuhleleka nokucaca okubukwayo.
Ama-margins okunye ukucutshungulwa kwamasu. Bambalwa abantu abangazakhi izethulo zokugxila okuphilayo ekugcineni amamajini alinganayo ezansi, phezulu, kwesobunxele nangakwesokudla. Ngokombono wami, amamajini aphakathi kwamathuluzi wokuqamba abaluleke kakhulu atholakalayo. Zama njalo ukugcina amamajini, noma ngabe kusho ukuncipha kwamashadi, umbhalo, izithombe nezinto ukuzenza zilingane ngenkathi kugcinwa amamajini angaguquki kumaslayidi akho.
Okokugcina, cabanga ngombhalo - sixoxe ngamaslayidi okwehla, nokulula, kepha iqiniso ukuthi uzobhekana nezindonga zamagama zombhalo ogcwele ngokweqile. Ngabe ubakha kanjani isigaba esinezigaba ezinezindonga zamagama? Sebenzisa umbhalo ngokunethuba. Njalo lapho unendima enkulu yombhalo, cabanga ukuhola ngesihloko semisho esifushane esifingqa ukuthatha okuyisihluthulelo endimeni. Futhi beka isihloko ngokuhlukanisa umbhalo oyisihloko, ukuwenza ube mkhulu kancane futhi / noma wenze umbala wefonti ube mnyama kunalesi siqephu.
Okokugcina Kodwa Okungenani, Bheka Ngaphakathi Kwesilayidi ngasinye
Izinga lokugcina lokusondeza libheka yonke into (isb. Ishadi ngalinye, isigaba sombhalo, isithombe, njll.) Ngaphakathi kwesilayidi ngasinye. Uma kukhulunywa ngemininingwane, lonke ishadi, ithebula negrafu kufanele kuhlobane ngqo ne-Center of Gravity jikelele. Cabanga ngokuqinile ukukhipha noma iyiphi isethi yedatha uma ingaqhubeki nenhloso ephelele yesethulo. Lokho kusho, ishadi ngalinye, itafula negrafu kudinga ukugxila kwayo, ibhalansi kanye nokulandelana okuyihlanganisayo.
Okokuqala, vuma ukuthi idatha yingane yakho. Uchitha amahora amaningi nemali wenza idatha yakho nokuhlaziywa kwakho, futhi ufuna ukuyaba. Inkinga ukuthi, akekho okhathalelayo kangako ngengane yakho (noma ngabe wabelana ngezithombe ezingaki zezingane), futhi akekho noyedwa onendaba nedatha yakho. Lapho bethula umsebenzi wabo, abantu abaningi babelana ngemininingwane ngoba abafuni ukudukisa noma ukudida, futhi okubaluleke kakhulu, abafuni ukushiya noma yini ebalulekile. Lokho kusho, cabanga lolo khiye endimeni yakho njengomethuli wokwenza uhlelo, ukukhulisa ulwazi, ukuletha imininingwane enokuqonda kunokungcwaba abalaleli kuyo.
Ngokwehlukana, ukwakheka kwedatha kusebenzisa amathuluzi afanayo nokwakhiwa kwesilayidi. Sebenzisa umbala ngokufanele nangokuqonda. Ukusetshenziswa kahle kwesikhala esingesihle kudala isigaba sabaphathi. Ekupheleni kosuku, idatha kufanele ibe yiqhawe, amaphuzu amaphuzu abaluleke kakhulu kufanele avelele. Susa amalebula neziqukathi ezingadingekile, amamaki we-hash, imigqa nezinganekwane. Susa izinsimbi namakhwela ezenza imfucuza nokudideka okubukwayo. Thola indaba kudatha, futhi ungadluli ngaphezulu.
Ukubilisa ukwakheka kwedatha okuhle kuhlu lwe-punch, kunezinto ezintathu ezibalulekile. Imininingwane idinga ukuba yile:
Okokuqala, idatha idinga ukuba lula kufinyeleleka futhi inembile. Amazembe nesilinganiso sokubukwayo, imigoqo nolayini kudingeka kube nenembile. Ukugcizelelwa okubonakalayo kufanele kuveze imininingwane. Isigaba sokubusa esifanele sokubuka kufanele senze idatha ibe yiqhawe, ngaphandle kwezinsimbi ezingadingekile nezimpempe.
Okwesibili, yidatha yakho onokuqonda? Idatha kufanele ixoxe indaba futhi ixhume ngqo kutimu yesethulo isiyonke. Uma kungekho lutho oluthokozisayo ngedatha, cabanga ukuyisusa. Cabanga ngokulinganisa ubukhulu be-data, ngoba uma iyimbudumbudu kakhulu, kuba nzima kakhulu ukugcizelela imininingwane.
Okwesithathu, imininingwane enhle, ngobuhle? Ngabe usebenzisa umbala njengethuluzi ngenhloso? Ingabe ukubonwa kwedatha kulula ngangokunokwenzeka? Ngabe kukhona imigqa egqamile, umbhalo namajamo lapho kudingeka khona? Ingabe sikhona isikhala esanele esingesihle?
Lapho udizayina noma isiphi isethulo, cabanga ukuthi sisebenza kanjani kumazinga amathathu okusondeza. Ezingeni ngalinye, cabanga ukuthi lihlangana kanjani ne-Center of Gravity jikelele. Futhi ngasikhathi sinye, kufanele futhi ibe nendawo yayo yokugxila egcina ihlangana. Gxila kulawa mazinga amathathu futhi isethulo sakho sizophatha usuku.
Tags: idatha yeshadiamashadiIdathaI-keynoteukwakhiwa kwezindatshanai-Power Pointukwakhiwa kwepowerpointisilayidi se-PowerPointisethuloukwakheka kwesethulo
UKory Grushka ungumsunguli we Inkampani Yezindaba, i-ejensi yokudala esiza abaholi bebhizinisi ukuthi batshele izindaba ezibucayi ngokwethulwa, ividiyo / ukugqwayiza, ama-infographics namadeshibhodi, phakathi kwamanye amathuluzi. UKory ungumqondisi wokudala, usomaqhinga, umphathi wezokuthuthukiswa kwebhizinisi futhi owayengummeli wenkampani. Unolwazi olunzulu ezimbonini ezahlukahlukene, ephethe amasu omkhiqizo, amasu amasha namaphrojekthi wokuklama ezinkampanini zeFortune 500 ezisukela ku-CPG kuye kwezobuchwepheshe.
Akuwona Wonke Umuntu Ongabona Iwebhusayithi Yakho
IJifflenow: Ukuthi Umhlangano we-Automation Platform Uwuthinta Kanjani Umcimbi we-ROI